Senraj Soundar's Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Senraj Soundar
Mushure mekunge Watson ave mukwikwidzi weJeopardy, IBM yakabatana neCleveland Clinic kubatsira vanachiremba kukurumidza uye nekuvandudza iwo mazinga echokwadi ekuongororwa kwavo nemirairo. Mune ino kesi, Watson anowedzera hunyanzvi hwevanachiremba. Nekudaro, kana komputa ikwanisa kubatsira kuita mabasa ekurapa, zvirokwazvo zvinoita sekunge munhu anogona kubatsira nekuvandudza hunyanzvi hwevatengesi zvakare. Asi, komputa ingazombotsiva vashandi vekutengesa? Vadzidzisi, vatyairi, vamiririri vekufamba, uye